Latsaka ambany be ny ankamaroan’ny naoty tamin’ny bakalorea, araka ny nambaran’ny mpitsara taranja filozofia, fizika simia ary sciences naturelles. Amin’ny ankapobeny, ho an’ny filozofia, tsy fantatry ny mpianatra akory ny zavatra andrasana aminy momba ny fanehoan-kevitra. Ho an’ny taranja sasany, tsy voafehin’ny mpiadina mihitsy ny laza adina. Tsy vitsy ireo nahazo naoty 0,25/20. Vita omaly ny fitsarana ny kopia rehetra fa hiditra amin’ny fampidirana ny naoty anatin’ny ordinatera ny mpikirakira izany. Samy manana ny heviny kosa ireo mpampianatra momba ny fisian’ny fihodinana faharoa manokana.
50%-n’ny antony mitarika ny fahajambana eto amintsika dia ny aretina katarakta avokoa, araka ny fanambaran’ny tomponandraikitry ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, Randriatsarafara, omaly tany Toamasina. Azo sorohina sy azo tsaboina tsara io aretina io ka nisy hetsika natao tao anatin’ny fanamarihana ny fahasalaman’ny maso nitsaboana olona 60 tao anatin’ny hateloana. Olona 25 isan’andro koa ny nodidina. Niavaka ny tolotra tamin’ny fandraisana ny zaza latsaky ny 15 taona manana olana fahitana. Hitohy ny fizahana eny ifotony tahaka izao hitiliana ny olona mila fitsaboana maso hisorohana ny fahajambana.
Hitohy, anio, ny hetsika am-pilaminana ataon’ny mponina eny amin’ny fokontanin’i Faravohitra noho ny olana fahatapahan-drano efa niseho naharitra ka mampitaraina ny vahoaka. Nanome 72 ora ny Jirama izy ireo nefa hatramin’ny omaly, tsy tonga ny tomponandraikitra nijery ny olana. Hisy fokontany hafa hanohana azy ireo.